China Dental Lab, Dental Lab, Dental hamboly, satro-boninahitra Ary Bridge - Foo Tian
Bakoly fused ny metaly
Kalitao iraisam-pirenena nanolotra asa laboratoara nify
Manome fakan-tahaka fanompoana manokana
Mampiasa afa-tsy tamin'ny taona na FDA nankatoavin'ny fitaovana
CAD CAM hamboly
Raha tokony ho vola sady namoaka ny vy rafitry ny amin'ireo fanjary tsaika andohalambo feno tetezana, manao ny vy firafitry ny amin'ireo fanjary tsaika andohalambo feno tetezana amin'ny CAM CAD fomba, dia milled amin'ny alalan'ny milina nitotoana azy, izay mety ho azo antoka sy marina tsara araka ny marina ambony. Tsy miala avy mba ho be kokoa ny marina, araka ny mifanaraka tsara foana tsy misy fanitsiana kely.
CAD CAM Malo Full Andohalambon'i hamboly Bridge
CAD CAM Malo hamboly Bridge
Full Arch Zirconia hamboly Bridge
Full Arch hamboly Bridge
Hamboly Surgery Guide
View rehetra CAD CAM hamboly
Screwed nihazona satro-boninahitra amin'ireo fanjary tsaika nataon-nomerika Notarafina raki-daza. Tsy afaka ihany no ataovy satro-boninahitra sy ny tetezana eo amin'ny fomba mahazatra, fa ihany koa dia afaka manao amin'ny efa be amin'ny fomba nomerika Notarafina raki-daza. Izany no tena mety ho an'ny mpitsabo nify sy ny marary, tahaka ny mpitsabo nify Tsy mila maka tahaka ireo fahatsapana silicone foana aza, afa-tsy maka Notarafina raki-daza avy amin'ny vavan'ny marary, ary ny marary dia tsy hanana fahatsapana trays silicone lehibe nataony ao am-bavany.
Model Ary Impression Scan
Perfect Ny Result
View rehetra Digital
Ve ianao mijaly noho uneven nify, ary satria menatra ny hampiseho ny nify? Tianao ve ny tonga lafatra ary na dia nify? Ary ny mangarahara lovia atao amin'ny Foo Tian Dental Lab avy any Shenzhen China afaka manampy anao. Ny mangarahara lovia fitsaboana tafiditra-mpahaimanitsinify na mpitsabo nify, na ny an-trano-monina rafitra, ny olona ny tenany, naka ny bobongolo ny marary nify, izay ampiasaina mba creat ny nomerika Notarafina nify. Ny ordinatera modely eo amin'ny dingana manoro hevitra amin'izao fotoana izao ary naniry nify toerana, ary trays dia noforonina ho an'ny dingana tsirairay. Raha ny mahazatra dia samy mangarahara lovia weared tokony ho 1 na 2 herinandro, dia manolo izany amin'ny hafa. Taorian'ny fanaovana ny trays rehetra, dia hahazo vokatra farany mahagaga ary na tonga lafatra nify amin'ny tsiky. Mangarahara tanteraka izany, izay mahatonga azy ireo kokoa noho ny vy malina vy fanitsiana tongotra. Matetika ny olona no tsy mahamarika azy.
Mangarahara lovia fitsaboana
Tianao ve ny tonga lafatra ary na dia nify?
Ary ny mangarahara lovia atao amin'ny Foo Tian Dental Lab avy any Shenzhen China afaka manampy anao.
View rehetra manary Mizaha Tavan'olona
Ny zirconia satro-boninahitra dia malaza karazana tanimanga crownwhich rehetra-dia tonta mba hanatsarana ny endriky ny toothwhich lasa voaloto na nanimban'ny nandritra ny taona maro. Izy ireo dia mateza, mora ny akanjo sy maharitra ela.
Zirconium satroboninahitra Afaka hofehezina fampiasana nentim-paharazana Dental Cements
Zirconia dia vy-maimaim-poana, izay misakana mihamaizina manodidina ny faritra gingival
View Full rehetra Ceramic Crown
amin'ireo fanjary tsaika fandidiana Guide
CAD CAM Malo amin'ireo fanjary tsaika tetezana
Tian Foo Dental Lab, miorina ao Shenzhen China, dia Full Service Dental Laboratory amin'ny teknisiana 100 mahery.
Inona no tokony ho fantatrao momba ny nify hanesorana ...
Full Service Shinoa Dental Lab & amin'ny Free Shipping
© Copyright - 2010-2019 : All Rights Reserved. Soso-kevitra - Hot Products - Sitemap - DIEM Mobile
Acrylic Dentures, Ceramic rehetra Famerenana amin'ny laoniny, Ceramic Blocks, Built In Micro Motor, Woodworking Machine, Dental Instruments,